Ny efitrano fampirantiana anay - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Tsidiho ny efitrano fandraisam-bahininay hahitanao ny hetsika Easy Multi Display.
FAMPISEHOAN-KEVITRA & TRANO FIVORIANA
Manana mpanjifa manerana an'i Eropa izahay, ary mirehareha amin'ny fanohanan'ny sarambaben'izao tontolo izao sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny fikarakarana mpanjifanay manokana dia nitarika anay hamorona Efitrano fampirantiana 2 natokana izay omenay demôsy sy fampiofanana.
Ny efitrano fampisehoana eto Brussels izao dia NISEHO!
Amin'ny efitrano fampisehoana vaovao nohavaozina any Brussels, azonao atao ny mandray anjara aminay mba hizaha toetra ny fahafahan'ny Easy Multi Display.
Alao ny valin'ny fanontanianao hamaly ny iray amin'ireo mpiasan'ny fanohanana voatokana ho anay ary raiso fiofanana amin'ny Easy Multi Display mba hahafahanao mahazo ny vahaolana ara-pirinty dizitaly ary mihazakazaka tsy misy fotoana.
Eto amin'ity toerana ity:
Demo momba ny lozisialy
Lahatsoratra avy amin'ny RICOH THETA. # theta360fr - Sary spherical - RICOH THETA
Ny efitrano fandraisam-bahinintsika ao Montpellier, atsimon'i Frantsa
Miasa mafy izahay amin'ny famoronana efitrano fampirantiana any Montpellier hahafahanao manatevin-daharana anay hametraka Easy Multi Display amin'ny fitsapana.
Valio ny fanontanianao avy amin'ny iray amin'ireo mpanohana anay sy manolo-tena ary mahazo fampiofanana manokana, na fampiofanana ekipa momba ny fomba fampiasana tsara ny Easy Multi Display mba hahafahanao mahazo ny vahaolana nomerika nomerika ary mandeha vetivety.
Te hahita Easy Multi Display amin'ny hetsika? Noho izany Mifandraisa aminay handamina demo maimaimpoana, na hahazo fampiofanana avy amin'ny ekipa teknikanay. Ny ekipanay dia faly miarahaba anao any amin'ny tranonay mba hahitanay ny rindrambaiko.